तपाईलाइ थाहा छ मृत्यु पछि मान्छेको नङ किन छाला भन्दा बाहिर देखिन्छ ? – Classic Khabar
August 28, 2021 122
सबैभन्दा डरलाग्दो, कहालीलाग्दो र हो’श उ’डाउने शब्द हो मृत्यु । त्यो पनि मानिसको । स्वजनको । अझ सबै भन्दा बढी त आफ्नै ! मृत्यु सुन्दा, देख्दा, पर्दा र भोग्दा को स्त’ब्ध हुदैन् र ? तथापी सान्त्वना दिन अनेक प्रपन्च रच्छ, मान्छे । म त म’र्दिन अरु नै कोहि पो मर्छ भन्छ ।
धन्न, धर्मले आत्मा मर्दैन् र बिज्ञानले मानिस मरेपछी उर्जामा रुपान्तरण हुन्छ भन्छ र राहात महशुस गर्छ, मान्छे। समयले बिस्तारै भुलाउँछ स्वजनको मृत्यु र औ’षधि गर्छ बाँचेको मानिसलाई । नत्र के हुन्थ्यो होला कठै! हाम्रो हालत ।
मान्छेको त कुरै छाडौं, स्वयं जन्माउने प्रकृतिलाई पनि थोक या खुद्रामा मृत्युको छुट दिने अधिकार छैन। यो तथ्य पनि त्यत्तिकै अकाट्य छ। नत्र प्रकृतिले जन्म दिने आमालाई आफ्ना सन्ततिको आयु तोक्ने अधिकार किन दिँदैन ? जबकि आमाभन्दा निःस्वार्थी दुनियाँमा अर्को प्राणी हुँदैन भनिन्छ।
जीवनको अस्तित्व सास रहुन्जेलका लागि मात्र हो। जीवन सकिएपछि त्यसलाई स्वतः मृत्युले अँगाल्छ। जीवनरूपी शरीर कुनै न कुनै रूपमा फेरि प्रकृतिमै विलीन हुन्छ। तसर्थ कुनै पनि प्राणीको नश्वर शरीर प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो भने मृत्यु उसको सबैभन्दा नजिकको मित्र। त्यसैले मृत्युले नश्वर शरीरलाई एक निमेष पनि छाड्दैन। बरु हरेक सुखदुःखमा साथ दिइरहन्छ।
हरेक प्राणीको जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ । यो जुनै बेला पनि आउन सक्छ । तर मृत्यु कहिले, कसरी आउँछ भन्नेबारे कसैलाई पनि थाहा हुदैँन । आज मृत्यु बारेका केही तथ्य बारे जानकारी दिदैछौ । जसले तपाईंलाई आश्चर्यचकित पार्न सक्छ ।
– डाक्टरको अक्षरका कारण हरेक वर्ष संसारभरी करिब ७ हजार मानिसको मृत्यु हुन्छ ।
– मृत्युपछि नङ बढ्दैन बरु नङ वरिपरिको छाला खुम्चिदा नङ बढेको जस्तो देखिन्छ ।
– मानिसको उत्पत्तिपछि अहिलेसम्म करिब १ सय बिलियन बढिको मृत्यु भइसकेको छ ।
– हरेक ९० सेकेन्डमा एक महिलाको मृत्यु प्र’सवको क्रममा हुन्छ ।
– रुसमा सन् १९२३ मा जन्मिएका करिब ८० प्रतिशत मानिसको मृत्यु दोस्रो विश्वयु’द्धमा भएको थियो ।
– हरेक ४० सेकेन्डमा संसारका कोही एक व्यक्ति देहत्याग गर्ने प्रयास गर्दछन् ।
– मानिसको मृत्युपछि सबैभन्दा अन्तिममा उनको सुन्ने शक्ति समाप्त हुन्छ । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
Prev‘एक दुई पात पहेँलिएर खस्दैमा रुखलाई केही फरक पर्दैन’ – ओली
Nextयो साता कुन राशीहरु हुँदैछन् मालामाल? हेर्नुहोस् भाद्र १३ गते देखी भाद्र १९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल